MUQDISHO, Soomaaliya - Dadaalladda ku saabsan soo celinta wadaxaajoodka dowlada Federaalka iyo maamulka Somaliland ayaa soo cusboonaaday markii Madaxwayne Muuse Biixi uu si cad u badalay mowqifkiisa la fariisashada xukuumada Muqdisho.
Isbedalka Muuse Biixi ayaa yimid markii kulan uu bishii hore Addis Ababa kula yeeshay Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed, kaasi oo wadankiisa uu doonayo in uu u dub-dhaxaad u noqdo wadahadaladda labada dhinac oo mudo hakad Ku jiray.
Todobaadkaan waxaa Jabuuti tegay wafdi uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hargeysa, kaasi oo Madaxwayne Ismaaciil Cumar Geelle kala hadlaya arrimaha ku xeeran wadahadalka.
Turkiga ayaa horey loogu qabtay wadahadalo u dhaxeeyay dowlada Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, inkasta oo aaney kasoo bixin wax natiijo ah.
Intaasi waxaa dheer, in mas'uuliyiinta maamulka Muuse Biixi ay horey ugu eedeeyeen Ankara in aanu dhexdhaxaad ahayn.
Dadka falanqeeya Siyaasadda Soomaaliya ayaa ka digaya in kala aragti kuwanaashiyo arrintaan ku saabsan ay dib u dhac ku keeni karto wadahadalka oo rajo wanaagsan laga qabo in ay kasoo baxaan qodobo miradhal ah, haddii labada dhinac muujiyaan Ka go'naasho iyo tanaasul.
Kenya oo xiriirka Muqdisho u weecisay Somaliland iyo qorshe cusub oo socda
Somaliland 25.06.2019. 11:00
Baarlamaanka Kenya ayaa ogolaadey in Shirkadda Kenyan Airways ay duulimaad toos ah ku sameyso Hargeysa.
Mareykanka oo duqeyn ku dilay maamulihii Hormuud ee Jilib 24.02.2020. 21:00
Guddiga doorashooyinka oo ka hadlay xafiisyada ay ka xirtay Puntland 24.02.2020. 20:20
Wasiir: Tobban jirka Al-Shabaab waa dilaa, mana iska qaban karno 24.02.2020. 17:25
Madaxweynaha Jubaland oo lagu soo dhaweeyay Dhoobley 24.02.2020. 16:00
Jahwareer siyaasadeed oo ku jira Malaysia; Mahathir oo is-casilay 24.02.2020. 15:45
Laftagareen oo eryay wasiiro ka tirsanaa xukuumada Koonfur Galbeed 24.02.2020. 14:44